Obere Azụmahịa Ntanetị Ntanetị | Martech Zone
Obere Azụmaahịa Mgbasa Ọchịchị Ebere na Nsonaazụ
Fraịde, Septemba 30, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
CrowdSPRING ebipụtala ihe omuma a na agwa obere oru mgbasa ozi. Mgbe mbụ m hụrụ stats na ojiji, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu na etu stats si dị ala bụ obere azụmaahịa. Lelee anya miri emi ma echere m na ọ bụghị ihe ijuanya. Ọ bụ nnukwu akụ na ụba na-agba ọsọ obere azụmaahịa na-aga nke ọma yabụ ịkwado mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe ịma aka.
Nke ahụ kwuru - ọ bụ ohere dị egwu maka ndị ọzọ na-eme obere azụmahịa. Ọ na-egosi na ọ nweghị asọmpi n’ebe ahụ! Bido blọgụ ma nwee ahịa gị. Soro na mgbasa ozi mmekọrịta ma wuo ndị na-ege gị ntị. Ọ gaghị agbanwe azụmahịa gị n’abalị, mana ọ bụ itinye ego ga-akwụ ụgwọ. Ọ nwere ike were izu, ọ nwere ike were ọnwa… mana ịkwesịrị itinye aka. Ọ bụrụ na ịmeghị, ndị asọmpi gị ga-eme ya.
Ntughari ndi mmadu na ndi ozo site na igwe mmadu
Iserị elu nke Mgbasa Ozi Ekwentị
Sep 30, 2011 na 5:58 PM
Nke a doro anya nwere ọtụtụ ihe ọmụma na-adọrọ mmasị… Otu ọnụ ọgụgụ ọ bụ ezie na, nke m, ọ dị ka ọ na-enweghị isi bụ ọnụọgụ na 51% nke ndị ọrụ facebook nwere ike ịzụta ngwaahịa nke ụdị ha na-agbaso ma ọ bụ ndị na-akwado ya.
N'ezie? Naanị 51%? Ọ bụrụ na anyị chee na ndị ọzọ enweghị mmasị, nke ahụ adịghị mma. Ma gịnị ma ọ bụrụ na anyị ewere na ndị ọzọ bụ n'ezie obere ngwaahịa nwere ike ịdị? Nke a abụghị ezigbo ọnụọgụ mgbe ahụ.
M ga-eche karịsịa na ọ ga-adị elu, n'ihi na ọtụtụ ndị ga-enwe ike ịgbaso ụdị ndị ha hụburu n'anya. N’ọnọdụ dị a ,aa, ọnụ ọgụgụ a ọ pụtara n’ezie ihe ọ bụla? Follow na-eso ụdị ị yikarịrị ka ị ga-azụta site na, n'ụzọ doro anya. Ya mere, olee ihe ndabere nke a? O yikarịrị ka ha ga-azụta dịka nsonaazụ nke ịbụ onye na-akwado na facebook kpọmkwem? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-apụta ihe.
Ma echeghị m na a ga-enwe ụzọ ọ bụla iji chọpụta nke ahụ. Yabụ, ka o siri kwụrụ, echeghị m na onye ọ bụla kwesịrị ịgụ ọtụtụ n’ime nọmba a.
Nke a nwere ọtụtụ ozi na-adọrọ mmasị